अक्षय कुमारको फिल्म ‘सूर्यवंशी’ बाट करण जोहरको नाम हटाइएकै हो ? यस्ताे छ खास कुरा – Jagaran Nepal
अक्षय कुमारको फिल्म ‘सूर्यवंशी’ बाट करण जोहरको नाम हटाइएकै हो ? यस्ताे छ खास कुरा
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंहको निधनपछि बलिउडमा नेपोटिज्मको बारेमा विवाद सुरु भएको छ । विवादमा फिल्म मेकर करण जोहरको नाम अगाडी आएको छ । अधिकांश मानिसहरुले करण जोहरलाई नेपोटिज्मलाई बढुवा दिएको आरोप लगाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि करण जोहरलाई ट्रोल गरिएको छ । यसैबीच सार्वजनिक भएको खबर अनुसार अभिनेता अक्षय कुमारको फिल्म ‘सूर्यवंशी’ बाट करण जोहरको नाम हटाइएको छ ।
खासमा करण जोहर फिल्म ‘सूर्यवंशी’ को निर्माता हुन् । सामाजिक सञ्जालमा करण जोहरको तीव्र विरोध भएको कारण उनको नाम हटाएको भारतीय मिडियाले जनाएकोे छ तर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शले भने यस खबरलाई झुठो भएको बताएका छन् । तरण आदर्शले आफ्नो ट्वीटमा लेखेका छन् –‘सार्वजनिक खबरमा जसरी करण जोहरलाई फिल्म सूर्यवंशीबाट हटाएको भनिएको छ त्यो गलत हो । ’
रोहित शेट्टीको निर्देशनमा बनेको फिल्म सूर्यवंशी यही वषको मार्चमा रिलिजको तयारीमा थियो । कोरोना भाइरसको कारण जारी लकडाउनले गर्दा फिल्मको रिलिज मिति स्थगित भएको हो । अब यो फिलम दिपावलीको अवसरमा रिलिज गरिने मिति सार्वजनिक भएको छ । यस फिल्ममा अक्षय कुमार र कटरिना क्याफ मूख्य भूमिकामा रहेका छन् ।